Injabulo kogogo baseMlazi ngokwenyuka kweyempesheni | Eyethu News
Injabulo kogogo baseMlazi ngokwenyuka kweyempesheni
IZOSHINTSHA impilo kogogo abathathu basesigcemeni sakwa-R eMlazi abazifikele mathupha entathelini ye-KZN Eyethu ngoMsombuluko bezozwakalisa injabulo ngokwenyuka kwemali yempesheni yabo ngo- Ephreli.
Ogogo baseMlazi uNkz Mantombazane Ngidi(60) , uNkz Thembi Nqoko (64) , uNkz Kholiwe Mngadi (62)bajabulele ukuthi imali yempesheni izonyuka ngenyanga ezayo. Isithombe:Thobile Zwane
Lokhu kulandela inkulumo kaNgqongqoshe wezeZimali uMnuz Pravin Gordhan okhuphule imali yempesheni neyesibonelelo sezingane. Labo gogo ngoNkk Mantombazane Ngidi (60), Thembi Nqoko (64) noKholiwe Mngadi (62) abathe bazolikhuphula kancane izinga lempilo benze nezinto abebehluleka wukuzenza.
Ongugogo wezingane ezingu-14 uNkz Thembi Nqoko (64) uthi useneminyaka eyisihlanu eyihola le mali ayiqala isenguR1 420.
“Bengijabula kakhulu nginabazukulu abayinqwaba abashonelwa oyise ngoba sebezokwazi ukuthola imali yokuphatha ezikoleni, ngo-Ephreli ngizobe ngikikiza nabo nje. Sengizokwazi ngisho ukuthenga umbhede phela ngilala esikebheni sombhede njengamanje,” kusho ugogo Nqoko. Uthe usezokwazi ukuthenga ngesikweletu esitolo, ubepatanisa eyokudla neyomfaniswano wesikole ngayo lemali. Uveze ukuthi engakayiholi lemali ubephila ngamawashingi asemzini yabantu.
UNkk Ngidi yena uthi ubephila ngokubamba amatoho ewashela abantu izingubo ngoR50, usitshele ukuthi ujabule ngoba usezokwazi ukuzithengela izinto zokugqoka futhi ondle nendodana yakhe.
Isaguga uNkz Kholiwe Mngadi uthi uqale ngonyaka odlule ukuhola ngoba ubenenkinga kamazisi obungaphumi.Uthe: “Lize laphuma ngonyaka odlule ipasi lami angijabulanga ngoba ngathola imali engango R1700 kwakufanele ngithole uR2000 nemali. Nganginezikweletu futhi ngiphuma esibhedlela ngoba ngangiphukile umlenze.”
Uqhube wathi usezokwazi ukuthenga impahla yokwakha njengoba ehlala nezihlobo, usezokwazi ukuphuma emzini wakhe uma ehamba.
Uphethe ngokuthi uyabonga kakhulu kuHulumeni ngoba lemali iyabasiza.
Imali yempesheni yezaguga izokwenyuka ngoR80 ibe nguR1500 eyezingane i izonyuka ngoR20 ibe nguR350.